Wii waa Console ah jiilka toddobaad ciyaarta video oo la sii daayay ay Nintendo on November 19, 2006. Waxaa sidoo cayaarta aad la Microsoft ee Madaxweyne Siilaanyo 360 oo Sony Playstation 3. Wii ayaa ku guulaysatay GameCube Nintendo iyo daydo hore ayaa sidoo kale si buuxda u socdeen la jaan qaada GameCube oo dhan kulan iyo waxyaabaha ugu inkastoo dabayaaqadii 2011, model ah oo loo qaybiyay oo cusub ayaa la sii daayay ay Nintendo- "ayuu Wii Qoyska Edition" oo ka maqan waafaqsan Nintendo GameCube. The Wii ka dambeeya "Wii U" ayaa lagu sii daayay November 18, 2012.
Wii wuxuu ka kooban yahay Wii xukuma fog oo ogaadaa dhaqdhaqaaqa sadex dhinac, baaba'ay WiiConnect24 oo u saamaxaaya in ay helaan farriimaha iyo updates in hab heegan internet-ka iyo sidoo kale download adeeg kulan, loo yaqaan Virtual Console.
Details of Wii Emulators
Xasuusta: 88MB xusuusta ugu weyn iyo 3 MB gundhig xasuusta texture GPU iyo framebuffer.
Kaydinta: 512 MB dhisay flash NAND. SD xasuusta kaarka ilaa 2GB.
Video: 480p (Pal & NTSC), 480I (NTSC), ama 576i (Pal / SECAM).
Processor PowerPC ku salaysan
2 USB dekedaha, awoodaha Wi-Fi oo Bluetooth.
Audio: rikoodh-Dolby Pro Logic 11. dhisay in afhayeenka in qofka xukuma.
Oo caan ku Games ku saleysan Wii
Iyadoo design heerka keligaa ayaa ah, Super Mariois tusaale ahaan suntaas qaadashada fikrado iyo iyaga balaadhinta galay siyaabo hal abuur leh oo cajiib ah. Qaybta ugu fiican ee kulankaan waa in Nintendo marnaba dadaweynaha hoos ku adag tahay iyo waxay bixisaa tuurnimo in la heli karo labada khibrad iyo waayo aragnimadoodu yar.
2.Metroid Ra'iisul gebogebada
Ra'iisul gebogebada Metroid waa ka badan kaliya seddex kulan weyn disk hal! Ciyaarta waa nooc ka mid ah taxanaha ah ee ah Tacaddi ugaadhsadaha Fadli ah iyo iyada caqabadaha iyo dagaallo ka dhan ah burcad badeeda bannaan, khalqiga shisheeye gaajaysan iyo maskaxda radioactive Rafaa. Ciyaarta ayaa immerses mid tuurnimo Tacaddi sida marna ka hor.
3.Resident Xun 4 (Wii Edition)
Ayaa gacanta ku casriyeeyay ee ciyaarta waxaa qibradiisa dhiibay iyo burburin madaxdii reer zombies marna dhamaaneynin in kulankaan ay u badan tahay waa waayo-aragnimo ugu qanco dilka loo on Wii.
4.Dead Space saaridda
Kulankaan ayaa malaha waa mid ka mid ah dadii ugu xiiso-on Shooter tareenka on Wii ah. Siisa kuwa daqiiqado naxdinta filimada ee daawashada ruux Necromorph ah idiin inta aad si weyn ugu toogto addimada ay hadda buuxiyey oo ku yaal kulan.
5.The Legend of Zelda: Dhacca Princess
No Console Nintendo abid bilaabay ciyaarta-ilaa Zelda ah Wii. Dagaal Tani biimayn ku salaysan na siiyey aragti ah waxa ay qaadato si ay u noqdaan nin geesi ah. In kulankaan, amiirad ku ahayd gabbaldhac oo maamusha nooga xirna ee Zelda la miisaan ah gudcur in aan la arkin tan ka hor.
Maxaad Dadku waxay rabaan Wii Emulator ah?
Wii Nintendo waa tallaabo horay loo qaaday dhinaca mustaqbalka video ciyaaraha oo isku keena kulan is-dhexgal. Intaa waxaa dheer in ay ka faa'iidaysanaya horumarka ee technology ciyaaraha, waxa kale oo aad u helaan kun oo kulan in ay maamulaan onWii madal. Kulan Kuwani waa heer sare oo ka buuxaan technology ugu dambeeyay oo u dhaqaaqdo laakiin nasiib darro haddii aad leedahay Console ah Wii, laga yaabo in aadan heli inuu u ciyaaro iyaga-iyo in ay meesha fikradda ah xaasidnimo ku yimaado.
Iyadoo emulator ah u Wii, waxaad noqon kartaa awoodo inuu ciyaaro kulan Wii ku dhufto ee kala duwan iyo in sababta dadku doonayaan emulator ah Wii. Emulators kala duwan ee Wii oo fogaynaysa in la samayn karaa oo keliya in si fiican u. Qaar ka mid ah emulators ugu fiican Wii yihiin lagaga hadlay cutubkii soo socda.
Sida badan Ajandooyinka Wii Emulators ordi karaan?
Emulators Wii waxaa loogu talagalay in uu ordo ku dhufto ee soo socda:
Qaar ka mid ah emulators Wii sida hoomboro ordi karaa dhamaan afarta dhufto ee.
10 EMULATORS Wii caan ah
Hoomboro ahaa GameCube emulator hore ay awoodaan in ay u ordaan kulan ganacsi. Waxaad u baahan doontaa cirfiid PC xoog leh qaab fiican ee ugu macquulsan. Hoomboro u ogolaanaya PC inay ku raaxaystaan ​​kulan consoles'ka GameCube iyo Wii buuxda HD (1080P) dhowr uqaadineed sida waafaqsan yahay oo dhan ilaaliyaal PC, multiplayer shebekadaha, xawaaraha turbo iyo xitaa ka sii badan.
Hoomboro waddaa ku dhufto ee soo socda: Windows, Mac & Linux
Qiimeynta: 7.9 (33,624 votes)
Dolwin waa il GameCube emulator furan si buuxda qoraal ah C. Inkasta oo ay weli ka yar tahay horumarinta, waxaad weli noqon kartaa awood u ordaan, kabaha, qaar ka mid ah ay maamulaan kulan ganacsi oo yar iyo goodhiyaha. File Its zip yimaado la demo ah in aad ka ciyaari kartaa in aad tijaabiso emulator ah. Waxa aan ku ordi doonaa oo dhan kulan ganacsi halkaas.
Qiimeynta: 7.0 (2676 votes)
SuperGCube waa Win32 emulator kasaarka Game ah, ku salaysan off GCube daayeen. Waa a emulator Nintendo GameCube daaqado kaliya. Thanks to ay core dega Khayaadka oo hufan oo heer sare ah filaayo, waxa ay gaari karo xawaare xad sare outperforming emulators kale in ay isticmaalaan farsamooyin badan oo horumarsan.
Qiimeynta: 6.6 (183 votes)
Whinecube waa emulator kale GameCube daaqado ku qoran isticmaalaya C ++. Whinecube awood u loading iyo DOL fulinta, dartaa, ama GCM qaab eedeysanuhu la sawiro, qoyaan, DVD, iyo xaasidnimo dhawaaqa.
Windows XP ama ka dib
Latest DirectX heli karaa
Card graphic A taageera diinta D3DFMT_YUY2 tusaale GeForce 256 ama cusub.
Whinecube ma ordi kulan ganacsi laakiin homebrew dhowr ciyaari karaa sida pong Pong.dol iwm
Qiimeynta: 7.0 (915 votes)
GCEmu waa emulator aad u dhamaystirnayn u GameCube Nintendo ah. Waxa uu isticmaalaa farsamooyin recompilation iyo tabaha kale si ay u gaaraan xawaare macquul ah. Xitaa haddii xaasidnimo waa mid aad u dhamaystirnayn, wuxuuna muujiyey in la samayn karaa xawaare aad u hufan.
Qiimeynta: 7.0 (2378 votes)
GCube waa il emulator u furan GameCube ugu horayn horumariyay ujeedada socda ugu yaraan hal kulan oo ganacsi si buuxda kudayasho. Hadda waxa aanu ciyaari aan wax ciyaar ganacsiga iyo sii daayo hadda waxaa loogu talagalay barnaamijyada homebrewn.
Qiimeynta: 6.4 (999 votes)
CubeSX waa emulator PlayStation ah GameCube Nintendo iyo version ah Wii sidoo kale waa la heli karaa. Waxaa weli ku jirta marxaladdii hore iyo xawaaraha iyo waafaqsan yihiin halkii hufan.
Cube64 waa emulator fantastik yar N64 shaqeeya on Wii iyo GameCube via SD / DVD. Si loo isticmaalo, waxaad u baahan tahay inaad marka hore aad nuqulka ROMS aad galay "Wii64> ROMS" ka dibna ku shuban kulan ee Cube64.
Tani waa emulator PSX ah GameCube ah. Emulator waa dhamaystirnayn sida waxa uu leeyahay maya taageero u o audio, CDDA audio, gui ama Saveslates laakiin waxay u ordi doonaan ugu kulan PSX.
> Resource > Emulator > Top 10 Wii Emulators - Play Nitendo Wii Games on Qalabka kale